Jeju Island - JeongSeong - Seoul (7D/6N)KH - 6001A
Jeju Island – JeongSeong - Seoul
Day : 1 Yangon - Incheon Airport (Dinner & Early Breakfast On Flight)
ည လေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မှ ဆိုးလ်မြို့ သို့ ထွက်ခွာပြီး နောက်နေ့ နံနက် ၅နာရီခန့်တွင် ဆိုးလ်မြို သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ လေယာဉ်ပေါ်တွင် ညလည်စာနှင့်နံနက်စောစော နံနက်စာကျွေးပါမည်။
Day :2Incheon Airport - Jeju Island (Breakfast, Lunch & Dinner)
လေယာဉ်ပေါ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ကာ လေဆိပ်သို့ နံနက် ၅နာရီခန့်တွင်ရောက်ရှိပါမည်။ လေဆိပ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့် တွေ့ဆုံကာ ဂျေဂျူကျွန်းသို့ လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပါမည်။ ပြီးလျှင် Dragon Rock Head, Eoyoungso Park နဲ့ Woljungli ကမ်းခြေလည်းသွားပါမယ်။ Woljungli ကမ်းခြေသည် ဂျေဂျူ ရှိသာယာပြီးလှပသောကမ်းခြေအဖြစ်နာမည်ကြီးပါသည်။ ပြီးလျှင် ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :3Jeju Island (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီး UNESCO world heritage Seongsan Sunrise Peak သွားကြပါမည်။ Seongeop village, Honey Shop & Davinci Museum များအပြင် Soesokkak with Hallabong juice သုံးဆောင်ကြပါမည်။
Day :4Jeju Island - Jeong Seon Resort (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တိုင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Check out လုပ်ကာ လေယာဉ်ဖြင့် Gimpo လေဆိပ်သို့ ပြန်ပြီး Jeong Seon သို့ထွက်ခွာပါမည်။ Jeong Seon မြို့ သည် Descendant of the sun ရိုက်ကူးရေးတွင်ပါဝင်သော နေရာများထဲမှတစ်မြို့  ဖြစ်သည်။ Hwaan Cave ကို ရထားအသေးလေးနဲ့ သွားရောက်လေ့လာကြပါမယ်။ Hwaan cave ဟာ ပြတိုဒ် အဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရွှေအများဆုံးတူတယ် ဂူကြီးလို့ဆိုပါတယ်။ ပြီးလျှင် Jeong Seon က Resort မှာအိပ်စက်အနားယူကြပါမယ်။
Day :5Jeong Seon Resort - Seoul (Breakfast, Lunch & Dinner)
Resort မှာနံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Byeongbangchi Sky walk ကိုသွားပြီးအလွန်လှပလွန်းလှတဲ့ ရှုခင်းကိုကြည့်ရှု ကြပါမယ်။ ပြီးလျှင် Jeongseon Rail bike တွေလည်းစီးကြပါမည်။ အဲဒီ့ကနေမှ ဆိုးလ်မြို့ ကိုပြန်ပြီး Dongdaemun fashion market မှာဈေးဝယ်ကြပါမည်။
Day :6Seoul City Tour (Breakfast & Lunch)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Gyeongbok Palace, National folklore museum (အဂါနေ့ဖြစ်ပါက Changdeok Palace), Presidential blue house များသို့သွားပါမည်။ Ginseng outlet သည် အလွန်ဗဟုသုတရပြီးသွားရောက်လည်ပတ်သင့်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပြီးလျှင် ကိုရီးယား Cosmetic outlets, မျောင်ဒေါင်လမ်း များတွင်ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် ဟိုတယ်ပြန်ကာ Seoul မြို့တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :7Seoul - Yangon (Breakfast & Lunch)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး Red Pine Shop နှင့် Amethyst ကျောက်ပြခန်းသို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ လမ်းမှာ Songwol-dong fairy tale village နဲ့ Trick Art Story ၀င်လည်းလို့ ဓာတ်ပုံရိုက် ပြီးလျှင် လေဆိပ်သို့ပို့ပေးကာ ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။
1.	International flight fare for round trip
2.	Hotel accommodation for 4night with twin sharing basis
3.	Meals as per itinerary (no drinks)
4.	Transportation as mention in the itinerary
6.	Entrance & Zone fees as in itinerary
7.	Equipment rental for Ski (not include Head & google & glove)
8.	Visa fees